I- Sibuyekezo se Swift Casino yase Ningizimu Afrika | I-100% Kufika ku-R2000 + 10 Spins wamahhala
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-swift casino
Isibuyekezo se-Swift Casino
Isofthiwe:Amaya, NetEnt, Play n GO, Microgaming, NextGen
Ibhonasi Lokukwamukela:100% Ize ifike R2,000 ne 10 ama-spins
21 ama-spins Ayikho Idiphozithi
I-Swift Casino yintsha sha – yasungulwa ngo-2020 ukubhekela isidingo esikhulayo samakhasino e-inthanethi. Futhi ibukeka njengekhasino yesimanje, enezithombe ezigqamile, umbala omnyama, namathani emidlalo nama-slots. Ikhasino ayinazo izingqikithi ezisobala- isebenzisa izibani “ezisheshayo” ze-neon eziluhlaza okotshani neziluhlaza okwesibhakabhaka kanye nophawu olunesitayela.
Ipulatifomu yesofthiwe isebenza nge-SkillOnNet, umhlinzeki wamakhasino owaziwayo osebenzela e-Malta. Futhi ingumphathi wekhasino, ngakho-ke usezandleni eziphephile maqondana nokuzinza nokukuphepha ku-inthanethi. Iningi lamakhasino e-inthanethi asebenzisa ipulatifomu ye-SkillOnNet, inkampane edumile.
Ngokufana no-opharetha, i-Swift Casino nayo inelayisense ye-Malta Gaming Authority, enye yezinhlangano ezikhipha amalayisense ehamba phambili embonini yamakhasino e-inthanethi. Inenkani uma kuziwa ekuvikeleni abadlali kanye nasekuphoqeni amakhasino ukuthi agcine amazinga aphezulu ekuvikelekeni kwedatha, ekugembuleni okufanele nasekusebenzeni ngendlela aelungile. Amathuba okuqolwa ekhasino enelayisense ye-Malta mancane impela.
Amakhasino asebenza nge-SkillOnNet avame ukuba nohlu olukhulu lwemidlalo yasekhasino ye-inthanethi yabo bonke abadayisi abaphezulu ebhizinisini. I-Swift Casino iyaqhubeka nalokhu, ngohlu olude lwabahlinzeki olunamagama angaphezu kwangu-40 abandakanya amakhulu afana ne-Netent, i-Microgaming, i-Pragmatic Play, i-Betsoft, namanye amaningi. Futhi ngemidlalo engaba ngu-1700, kunokuningi okwanele abadlali abafuna okuningi.
Ikhasino igcwele ama-jackpot akhula njalo (progressive jackpots), njengoba kubonakala ekhasini lokwamukela. Kukhona umshini wokubala obonisa inani lamanje lama-jackpots atholakalayo lapha, elingaphezu kwamarandi ayizigidi ezingu-300 ngesikhathi salesi sibuyekezo. Ezinye izigaba zemidlalo zibandakanya i-poker, i-blackjack, neminye imidlalo yamakhadi, kanye nekhasino ebukhoma esebenza ngezinkampane ezinkulu ezifana ne-Netent ne-Evolution.
Ingabe i-Swift Casino iyindlela ephephile yabadlali baseNingizimu Afrika ngo-2020? Lowo ngumbuzo omkhulu esizowuphendula kulesi sibuyekezo esijulile. Qhubeka ufunde ukuthola ukuthi ingabe kufanele ufake imali yakho kule khasino ye-inthanethi entsha.
SWIFT CASINO e-NINGIZIMU AFRIKA
Iwebhusayithi ye-Swift Casino itholakala ngesiNgisi, isiJalimane, isiFinnish, nesiNorwegian. Njengoba iphethe ilayisensi yase-Malta, ikhasino ibhekele imakethe yaseYurophu. Kepha lokho akusho ukuthi abadlali baseNingizimu Afrika abanakwa.
Eqinisweni, i-Swift Casino inezici eziningana eziyenza ukuthi ibe yikhasino enhle yokukhetha kubadlali abavela eNingizimu Afrika. Konke kuqala ngesigaba sokubhenka. Kumakhasino e-inthanethi, izici zokukhokha zibucayi ngoba uzoba ukubhekana nemali eningi njalo, uwina kaningi kuma-slot nakuma-jackpot ajabulisayo.
Ukujabulela isipiliyoni esibushelelezi ngaphandle kwezindleko ezengeziwe, udinga ikhasino esekela imali yezwe lakho. Futhi i-Swift Casino yenza lokho ngokwamukela izinkokhelo ngamaRandi aseNingizimu Afrika. Azisekho izindleko ezibiza kakhulu zokushintsha imali ukuze udlale ama-slot akho owathandayo nama-jackpot ku-inthanethi! Ikhasino ihlanganisa lokho nezindlela eziningi zokukhokha ezisebenza kahle eNingizimu Afrika njenge-EasyEFT.
Isigaba sebhonasi singenye into evelele yale khasino. Uzothola amaphromoshini akhethekile abadlali baseNingizimu Afrika lapha. Njengelungu elisha, ungadlala ama-spin ekheshi mahhala ngokuphelele usebenzisa ibhonasi yediphozithi engekho ethokozisayo. Ngemuva kwalokho ungasebenzisa ibhonasi yokukwamukela ephinda kabili idiphozithi yakho yokuqala. Abadlali abajwayelekile bangajabulela amaphromoshini amabhonasi angahleliwe nsuku zonke, imiqhudelwano ethokozisayo, nezinye izinzuzo zamahhala ze-VIP.
Ilayisense esezingeni lomhlaba iqinisekisa isipiliyoni sokudlala esisezingeni lomhlaba. Futhi yilokhu okuthola e-Swift Casino eNingizimu Afrika. Imigomo isobala, imidlalo iyamangaza, iwebhusayithi ivikelekile, futhi izinkokhelo ziyaqinisekiswa, futhi igembula okufanele- yikuphi okunye ongakucela?!
Ake sibhekisise zonke lezi zici e-Swift Casino, siqale ngebhonasi yokukwamukela.
Lapho uqala ukuvakashela i-Swift Casino, ungabheka iqoqo lemidlalo labo ezigabeni ze “Casino” ne “Live Dealer”. Inani lemidlalo lapha lisondele ku-3000, kepha akuyona yonke ezotholakala yonke indawo ngenxa yamalayisense nezinkinga zomthetho.
Uma useNingizimu Afrika, uyakwazi ukufinyelela kumidlalo nama-slot angu-1700+. Nakuba lokho kusho ukuthi uphuthelwa yimidlalo evela kubahlinzeki abaningana, yonke emikhulu isatholakala. Sikhuluma ngamagama afana ne-Netent, i-Pragmatic, i-Red Tiger, i-Play N Go, ne-Blueprint Gaming.
Uma usubhalisile wangena ngemvume, uzothola ukufinyelela kusayithi lokudlala ngokushesha. Lapha, indawo yokwamukela izivakashi inezigaba ezehlukene ezinjengeMidlalo Emisha, Imidlalo Edume Kakhulu, i-Drop Yansuku Zonke, nama-Jackpot Ansuku Zonke – konke kuyazichaza.
Isici esihle e-Swift Casino wukucaca mayelana nemidlalo. Ungahlola imininingwane ebalulekile yomdlalo ngamunye ngokuchofoza uphawu -“i” olutholakala ekhoneni eliphezulu ngakwesokudla kwesithonjana somdlalo. Kweminye imidlalo, baphinde basho abawinile bakamuva abadlale lowo mdlalo muva nje, okuyinto enhle.
Ikhasi lakho lokungena ngemvume le-Swift Casino linama-tab amaningana- lezi yizigaba ezahlukene lapho imidlalo engu-1700 yasekhasino etholakala khona. Kwenza ukuphequlula nokuthola imidlalo oyithandayo kube lula, naphezu kwelabhulali yemidlalo eminyene.
Ake sibhekisise iqoqo lemidlalo lase-Swift Casino:
Abadlali baseNingizimu Afrika banokufinyelela kuma-slot evidiyo nama-slot akudala angu-1600 e-Swift Casino. Njengoba kwenzeka njalo emakhasino e-inthanethi anamuhla, ama-slot ayiningi lemali. Imidlalo ye-jackpot kanye nama-jackpot ansuku zonke nayo iyingxenye yeqoqo lama-slot lapha, futhi athola ama-tab ahlukile okufinyelela kalula.
Asikho isidingo sokuhlolisisa izici nezindikimba- ziningi kakhulu! Njengoba kutholakala izihloko ezihlukile, uzothola okuthize okuzohambisana nalokho okuthandayo. Ama-slot e-Netent njenge-Gonzo’s Quest, i-Starburst, i-Drive Multiplayer Mayhem, kanye ne-Secrets of Atlantis Touch.
I-Red Tiger, i-Pragmatic, i-Quickspin, kanye ne-Merkur anama-slot angu-100+ lapha. Izihloko ezintsha ezifanele ukudlalwa zibandakanya i-Curse of the Werewolf, i-Rage of the Seas, i-Rise of Olympus, i-Imperial Riches, i-Wild Mantra, ne-Golden Ticket 2.
I-Swift Casino inama-jackpot kanye nama-jackpot ansuku zonke abiza ngaphezu kwamaRandi ayizigidi ezingu-300. Kutholakala ama-slot angaphezu kwangu-100 kulezi zigaba ezimbili. Ama-progressive angabonakala ngenani le-jackpot elibhalwe ekhoneni elingezansi ngakwesokunxele kwesithonjana somdlalo.
Uma ufuna ukuba wusozigidi, ungabheki okunye ngaphandle kwama-progressive amakhulu anjenge-Divine Fortune (R4 million), i-Ted Jackpot King, i-Cop the Lot, i-Genie Jackpot, i-Mighty i-Griffin Megaways (wonke R13 million), i-Mega Fortune (R47 million), i-Arabian Nights (R24 million), i-Hall of Gods (R70 million), kanye namanye amaningi.
Ama-jackpot ansuku zonke, njengoba igama lawo lisho, aqinisekisiwe ukushaya i-combo yokuwina nsuku zonke. Abaphumelele ngenhlanhla bathola imali ebalelwa ku-R700,000 kule midlalo. Kunenqwaba yalawa ma-jackpot e-Swift Casino, namagama afana ne-Phoenix Fire Power Reels, i-Piggy Pirates, i-Mystic Wheel, i-Masquerade, kanye ne-Jewel Scarabs.
Ngemuva kwama-slot nama-jackpot, imidlalo yomdayisi obukhoma ihlonishwa kakhulu e-Swift Casino. Uma uvula ama-tab afana ne-roulette ne-blackjack, uthola iqoqo elimangazayo lamagumbi omdlalo wasekhasino obukhoma osebenza nge-Pragmatic Play kanye ne-Netent.
Kukhona ukugqagqana kancane ngoba ungathola imidlalo efanayo kulezi zigaba ezintathu- Amakhasino Abukhoma, Roulette, ne-Blackjack. Umehluko kuphela wukuthi i-roulette ne-blackjack ingaba nemidlalo yasetafuleni yekhasino ejwayelekile.
I-Swift Casino inamagumbi emidlalo angu-40+ asebenza 24×7. Uma ungumthandi wekhasino esesakhiweni, ungajabulela isipiliyoni sangempela ngabadayisi abangabantu kanye namakhadi/amadayisi/ amasondo e-roulette angempela kule ndawo. Imidlalo etholakalayo ibandakanya i-Ripid Auto Roulette, i-BlitzBlackjack, i-Baccarat B, ne-Sic Bo.
Ama-Scratch Game Nokunye
Lezi yizigaba ezimbili zomdlalo ezincane e-Swift Casino. Okumangazayo lapha wukuthi asikho isigaba semidlalo yasetafuleni – ifakwe esigabeni esibizwa ngokuthi “Others”, esibuye sibe nemidlalo ye-poker yevidiyo. Ama-Scratch Card anezihloko ezingaba ngu-15, ezinjenge-Lucky Girl, i-7 Piggies 5000, i-Fishin Frenzy, ne-Gold Rush 250,000.
Ngokufanayo, isigaba ‘Others’ siyikhaya lemidlalo yasetafuleni embalwa kanye neye-poker yevidiyo engaba yishumi nambili. Amagama abandakanya i-Punto Banco, i-Pai Gow Poker, i-Baccarat, i-Casino War, i-Deuces Wild, i-Aces & Faces, ne-Jacks. Ngokusobala, i-Swift Casino ibonakala ibeka phambili amakhasino abukhoma kunemidlalo yakudala yasetafuleni yomdlali owodwa.
Amakhodi Amabhonasi Okukwamukela e-Swift Casino
Umbono wakho wokuqala wokudlala e-Swift Casino uqinisekisiwe ukuthi uyokhumbuleka, ngenxa yale bhonasi yokukwamukela. Ingumnikelo okhethekile wabadlali baseNingizimu Afrika, otholakala ngamadiphozithi eRandi. Ungayiphinda kabili idiphozithi yakho yokuqala (namathuba akho okuwina) ngalo mnikelo. Futhi isivumelwano sihle ngoba uthola ama-spin amahhala! Ibhonasi ibiza isamba esingu-R2000, nama-spin amahhala angu-10.
Le phakheji yebhonasi inemithetho ebalulekile elandelayo:
Kudingeka idiphozithi eqala ku-R200 ukuthola ibhonasi
Ukuvula ibhonasi, sebenzisa ikhodi ethi SWIFTZA ngenkathi wenza udiphozitha yokuqala
Isamba sebhonasi singu-R2000
Ama-spin amahhala anenani eliphakeme lokubheja elingu-R10
Isidingo sokubheja ukuze ukhiphe imali sebhonasi yokukwamukela ngu-30 x (ibhonasi + idiphozithi)
Isidingo sokubheja ukuze ukhiphe imali sama-spin amahhala ngu-60x imali oyiwinile
Kumele usebenzise ama-spin amahhala ngaphambi kokusebenzisa imali yebhonasi
Ama-slot kuphela anomthelela ngo-100% ekufezekeni kwesidingo sokubheja ukuze ukhiphe imali
Swift Casino Ikhodi Yebhonasi Yediphozithi Engekho
Abadlali abasha abavela eNingizimu Afrika bavuzwa ngokunikezwa iphromoshini ekhethekile yediphozithi engekho e- Swift Casino. Vakashela ikhasino ekhasini lethu ukuze uthole le bhonasi enhle, ekunikeza ama-spin amahhala angu-21 ku-Rich Wilde kanye ne-Book of Dead slot. Konke okudingayo yi-akhawunti yomdlali ebhalisiwe ne-imeyili eqinisekisiwe ukuthatha le phromoshini – ayikho ikhodi yebhonasi noma idiphozithi edingekayo. Inezici ezilandelayo:
Ama-spin amahhala asebenza ku-Book of Dead
Inani eliphakeme le-spin ngu-R1
Isamba semali ongayikhipha ngu-R100 noma u-10% walokho okuwinile, noma yikuphi okuphansi
Amanye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa yi-Swift Casino
I-Swift yikhasino ye-inthanethi entsha, lokhu kukhonjiswa nakukhasi labo lamaphromoshini. Ibinaphromoshini ambalwa ngesikhathi sokubuyekezwa ngo-2020. Kepha silindele ukuthi lokhu kuzoshintsha ngokukhula kwekhasino.
Kodwa okwamanje, abadlali basenezinto eziningi ezijabulisayo nezikhuthazayo ezibalindile, ezingamaphromoshini amathathu ayinhloko e-Swift Casino. Lawa maphromoshini atholakala kubadlali ababhalisile abasebenzise ibhonasi yabo yokukwamukela.
Ongakukhetha Nsuku Zonke
Usuku ngalunye e-Swift Casino luletha isimanga salo ngale phromoshini ethokozisayo. Usuku ngalunye uthola ukukhetha kumabhonasi ahlukile.
Lokhu kungaba ama-spin amahhala, ukudiphozitha kabusha, ukubuyiselwa ukheshii, noma inhlanganisela yakhi konke. Awazi uze ungene ngemvume bese uhlola ikhasi lamaphromoshini! Le phromoshini itholakala zonke izinsuku eziyisikhombisa zesonto.
Jabulela ukuthakazelisa kwemiqhudelwano yamabhodi abaholi (leader-board) ejabulisayo 24×7 e-Swift Casino! Inemincintiswano okungenani emibili eyiqhubayo nganoma yisiphi isikhathi. Noma ngubani angajoyina uma bene-akhawunti yomdlali esebenzayo. Ngena ngemvume, udiphozithe imali, bese uqala ukudlala ama-slot owathandayo. Uma uphezu kwe-leaderboard ekupheleni komqhudelwano, uzuza imiklomelo yemali ethokozisayo nama-spin amahhala.
Ikilabhu ye-VIP e-Swift Casino ivulekele bonke abadlali. Uthola amaphoyinti e-VIP ngazo zonke izikhathi ubheja ngokheshi. Qoqa lawa maphoyiniti ukuvula amazinga aphezulu bese uzuza izinzuzo eziningi. Kunamazinga ayisithupha – amabili aphezulu avulwa ngokumenywa kuphela. Izinzuzo zibandakanya abaphathi be-akhawunti ye-VIP, ukumenywa emicimbini ekhethekile nemincintiswano, kanye namabhonasi amakhulu.
Amanye Amaphromoshini Akhethekile
Ongakukhetha Nsuku Zonke Usuku ngalunye e-Swift Casino luletha isimanga salo ngale phromoshini ethokozisayo. Usuku ngalunye uthola ukukhetha kumabhonasi ahlukile. Lokhu kungaba ama-spin amahhala, ukudiphozitha kabusha, ukubuyiselwa ukheshi, noma inhlanganisela yakho konke. Awazi uze ungene ngemvume bese uhlola ikhasi lamaphromoshini! Le phromoshini itholakala zonke izinsuku eziyisikhombisa zesonto.
Imiqhudelwano Jabulela ukuthakazelisa kwemiqhudelwano yamabhodi abaholi ejabulisayo 24×7 e-Swift Casino! Inemincintiswano okungenani emibili eyiqhubayo nganoma yisiphi isikhathi. Noma ngubani angajoyina uma ene-akhawunti yomdlali esebenzayo. Ngena ngemvume, udiphozithe imali, bese uqala ukudlala ama-slot owathandayo. Uma uphezu kwe-leaderboard ekupheleni komqhudelwano, uzuza imiklomelo yemali ethokozisayo nama-spin amahhala.
Igumbi le-VIP Igumbi le-VIP Ikilabhu ye-VIP e-Swift Casino ivulekele bonke abadlali. Uthola amaphoyinti e-VIP ngazo zonke izikhathi ubheja ngokheshi. Qoqa lawa maphoyiniti ukuvula amazinga aphezulu bese uzuza izinzuzo eziningi. Kunamazinga ayisithupha - amabili aphezulu avulwa ngokumenywa kuphela. Izinzuzo zibandakanya abaphathi be-akhawunti ye-VIP, ukumenya emicimbini ekhethekile nemincintiswano, kanye namabhonasi amakhulu.
Indlela Yokungena Ngemvume Nokubhalisa e-Swift Casino
Ukujabulela amabhonasi kanye nenjabulo yokubheja ngemali yangempela, kuzodingeka ubhalise i-akhawunti yomdlali e-Swift Casino. Kodwa uma kwenzeka ukuthi ufuna nje ukuzama ama-slot ambalwa mahhala, ungakwenza lokho lapha, ngaphandle kwesidingo sokubhalisa. Hambisa isikhombisi se-mouse yakho ngaphezulu kwe-slot ukuhlola ukuthi ngabe inesici se “Try For Free”. Uma inaso, chofoza lokho esikhundleni se “Play Now”. Khumbula, ngeke uzuze noma iyiphi imali yangempela uma usebenzisa le modi! Ngalokho, udinga ukulandela lezi zinyathelo ezilula ukudala i-akhawunti yakho entsha ekhasino:
Vakashela iwebhusayithi ye-Swift Casino – ungasebenzisa isiphequluli se-PC noma isiphequluli seselula yakho
Chofoza inkinobho ethi ‘Bhalisa’ lekhasi lokwamukela ohlangothini lwesobunxele
Faka imininingwane elandelayo:
Uzothola i-imeyili evela ekhasino. Landela izinyathelo ezifakwe ku-imeyili ukuqinisekisa i-akhawunti yakho. Ungathatha ibhonasi yediphozithi engekho namanye amaphromoshini uma une-akhawunti eqinisekiswe ngokuphelele kuphela.
Futhi ngaphambi kokwenza idiphozithi yakho yokuqala, ikhasino izokucela ukuthi ufake amakhophi ekhadi lakho le-ID kanye nobufakazi bekheli ukuqinisekisa ngokwe-KYC. Manje usungangena ngemvume nganoma yisiphi isikhathi usebenzisa igama lomsebenzisi nephasiwedi yakho entsha, udiphozithe imali, uthathe zamabhonasi, kanye nokuzijabulisa udlala!
○ Igama eliphelele
○ Usuku lokuzalwa
○ Ikheli le-imeyili
Gcwalisa zonke izikhala ngokunembile bese uchofoza “Continue” ukuya esinyathelweni 2
Lapha, kumele uhlinzeke ngale mininingwane:
○ Ikheli neKhodi Yeposi
○ Idolobha Nezwe
○ Inombolo yeselula
Chofoza/thinta “Continue” ukuya esigabeni sokugcina senqubo yokubhalisa
Ewindini lokugcina, faka le mininingwane:
○ Igama lomsebenzisi le-akhawunti yakho
○ Iphasiwedi ephephile ye-akhawunti
Ungahlela nemikhawulo yediphozithi uma ufuna (lokhu kungenziwa futhi ngokuhamba kwesikhathi)
Konke okusele ukukwenza wukuqinisekisa ukuthi uneminyaka engu-18+ nokuthi uyavumelana nemigomo yekhasino ngokuthikha amabhokisi
Chofoza/thinta “Go Play” ukudala i-akhawunti yakho
Ingabe i-Swift Casino Iyatholakala Yini Kuselula?
Yebo, ipulatifomu ye-SkillOnNet yekhasino iyasebenza kuselula. Ungadlala e- Swift Casino usebenzisa noma iyiphi i-smartphone yanamuhla esebenza nge-Android noma i-iOS. Igama leselula kanye nencasiselo nge-hardware akubalulekile kangako. Ungadlala le midlalo kuma-ecosystems amadala afana ne-Windows ne-Blackberry.
Uma ufuna ukuphatha yonke ikhasino esikhwameni sakho bese udlala nomaphi, qinisekisa ukuthi unalezi zinto ezintathu:
Noma iyiphi iselula noma i-tablet enesiphequluli sesimanje esifana ne-Safari, i-Chrome, noma i-Firefox
Ukuxhumana kwe-inthanethi okuthembekile (kuhlala kusebenza) – kuncanyelwa i-Broadband WiFi noma i-4G ukusebenza kahle
Noma iyiphi idivayisi entsha yeminyakeni engu 2-4 edlule, njengoba athola izibuyekezo zokuphepha ku-Google/Apple (kunconyelwe ukuphepha okuthuthukile ku-inthanethi)
Ikhasino ayidingi i-app yayo – ipulatifomu ye-HTML5 ingavula iwebhusayithi efanayo kumadivayisi nezikrini eziningi. Inguqulo yeselula yekhasino ingabukeka ihluke kweyedeskithophu, ngoba iyenzelwe izikrini ezincane.
Kodwa-ke, uthola izici ezifanayo, amabhonasi, nakakhulukazi imidlalo efanayo. Sithi ikakhulukazi ngoba wonke ama-slot anamuhla ekhasino ye-inthanethi adlala kuselula, kodwa eminye imidlalo emidala ayidlali. Uhlu lwemidlalo yeselula lungaba ncanyana, kepha lusenawo wonke ama-slot akamuva, lubandakanya:
Ngingayidawuniloda Yini i-Swift Casino Kuselula Yami?
Cha, njengoba sekushiwo esigabeni esingenhla, ayikho i-app ye-Swift Casino. Ungadlala wonke ama-slot owathandayo nemidlalo yasekhasino ngaphandle kobunzima bokudawuniloda noma iyiphi i-app noma uhlelo. Vula isiphequluli seselula yakho ukuvakashela ikhasino bese udlala. Le yindlela yesimanje yokudlala amakhasino eselula.
Izindlela Ezivunyelwe Zokukhipha Imali e-Swift Casino
Ijubane Lokukhipha Imali
Wire Transfer Yebo Izinsuku ezi-4 kuya kwezi-7
Visa Yebo Izinsuku ezi-2 ukuya kwezi-4
Skrill Yebo Usuku
Neteller Yebo Usuku
EasyEFT Yebo Usuku
EcoPayz Yebo Usuku
Izindlela Ezivunyelwe Zokudiphozitha Imali e-Swift Casino
Wire Transfer Cha
Swift Casino Imininingwane Evamile
Isungulwe: 2020 Inombolo Yocingo Yamahhala yase-SA: Ayikho
Umphathi ngu: SkillOnNet Umphathi ngu: SkillOnNet I-imeyili: [email protected]
Ilayisense: Malta Gaming Authority (MGA) Ilayisense: Malta Gaming Authority (MGA) Ingxoxo Ebukhoma: Yebo (amalungu kuphela)
Uhlobo Olungadingi Ukudawunilodwa: Yebo Iwebhusayithi: https://www.swiftcasino.com/
Ubuhle Nobubi be-Swift Casino
Imidlalo engaphezu kwengu-1700 evela ku-Netent nabanye
Amabhonasi akhethekile abadlali baseNingizimu Afrika
Ukuhwebelana ngeRandi laseNingizimu Afrika kuyasebenza
Ilayisensiwe yi-Malta Gaming Authority
Uhlu olukhulu lwemidlalo yasekhasino ebukhoma
Ama-jackpot akhula njalo (progressive) amaningi
Imbalwa kakhulu imidlalo yasetafuleni
Alukho usizo locingo lwase-SA
Yini Eyenza Ukuthi I-Swift Casino Ikhethwe Kakhulu Ngabadlali baseNingizimu Afrika?
I-Swift Casino ivela kumdayisi/u-opharetha wesofthiwe owaziwayo – SkillOnNet. Lokhu kwenza ikhasino ukukhetha okunokwethenjelwa, nakuba iyikhasino entsha sha. Noma ibhekele abadlali abavela e-EU nakwezinye izingxenye zomhlaba, ikhasino ilungele abadlali baseNingizimu Afrika ngenxa yezici ezilandelayo:
Amabhonasi akhethekile abandakanya ibhonasi yediphozithi engekho yabadlali baseNingizimu Afrika
Izindlela zokukhokha ezinobungane ne-SA
Iyamukela izinkokhelo ngeRandi lase-SA kanye nokukhipha imali
Inama-slot ahamba phambili avela kubadayisi abaphezulu abanjenge-Netent
Inama-jackpot abiza ngaphezu kwamaRandi ayizigidi ezingu-300
Izindlela zokukhokha ezilula
Amalayisense ekhwalithi ephezulu
Ngezici eziningi ezinhle, i-Swift Casino izoheha “ngokushesha” abadlali abavela e-Ningizimu Afrika.
Izikhalo nge-Swift Casino Ningizimu Afrika
I-Swift Casino yintsha sha – isungulwe ngo-2020. Kuthatha isikhathi ukuthi amakhasino e-inthanethi athuthukise idumela elincike kunani nobuningi bezikhalo (uma zikhona) eziba khona eminyakeni edlule. Kusekusha kakhulu ukubheka lokhu maqondana ne-Swift Casino. Sizoba nombono ongcono eminyakeni embalwa ezayo. Njengamanje, kubonakala sengathi ikhasino ayinazo izikhalo ezinkulu ngayo.
Imibuzo Evamise Ukubuzwa (FAQs)
Ingabe i-Swift Casino Isemthethweni eNingizimu Afrika?
Ayikho ikhasino ye-inthanethi esemthethweni eNingizimu Afrika. Umthetho awukuvumeli ukugembula ku-inthanethi ezweni. Lokhu kuyinkinga kuphela kumabhizinisi azimisele ngokuqala ikhasino ye-inthanethi ngaphakathi kwaseNingizimu Afrika. Amakhasino angaphesheya kolwandle asezindaweni ezinjenge-Malta, i-Gibraltar neCuracao anikela ngezinsizakalo kubadlali abavela eNingizimu Afrika ngokukhululeka. Uhulumeni akahlaseli abadlali abajoyina futhi badlale kulawa makhasino, ngakho-ke kuphephile ukudlala e-Swift Casino.
Ngiyikhipha Kanjani Imali ku-Swift Casino?
Izicelo zokukhipha imali zingenziwa ekhasini likakheshiya le-Swift Casino ngemuva kokungena ngemvume. Yiya engxenyeni ethi ‘Withdraw’ ewindini ye ‘Cash Management ‘, ukhethe indlela yakho yokukhokha ubatshele ukuthi ufuna ukukhipha malini. Kodwa ngaphambi kokukhipha imali e-Swift Casino (noma kunoma iyiphi ikhasino), hlola izinto ezilandelayo:
Ukuthi ibhalansi yakho inemali engaphezulu komkhawulo ophansi wokukhipha imali wekhasino wendlela yakho yokukhokhwa oyithandayo
Ukuthi awekho amabhonasi noma izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali ezingakafezeki ku-akhawunti yakho
Uma unezidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali bese uqhubeka ngokufaka isicelo sokukhipha imali, ubeka okuwinile engcupheni! Hlala unaka izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imlali ngaphambi kokukhipha imali.
Yini i-Swift Casino?
I-Swift Casino iyikhasino ye-inthanethi enelayisense futhi isebenzela esiqhingini sase-Malta e-Mediterranean Europe. Ilayisense ye-MGA ivumela i-Swift Casino ukuthi yamukele abadlali abavela e-European Union (hhayi e-UK), nakwamanye amazwe amaningi emhlabeni abandakanya iNingizimu Afrika.
I-Swift iyikhasino elihlinzeka ngezinto eziningi esebenza ngepulatifomu yokugembula ye-SkillOnNet. Inemidlalo engaphezu kwengu-3000 evela kubadayisi abangu-40+, babandakanya i-Netent, i-Pragmatic Play, i-Red Tiger, i-Play N Go, neminye eminingi. Imidlalo engu-1700 iyatholakala kubadlali baseNingizimu Afrika, isatshalaliswa ezigabeni ezinjengama-slot, ama-jackpot, nemidlalo yasekhasino ebukhoma.
Ngubani umnikazi we-Swift Casino?
I-Swift Casino iyikhasino ye-inthanethi ephethwe yi-SkillOnNet. Iphinde iphathe ipulatifomu yesofthiwe ikhasino esebenza ngayo. I-SkillOnNet ingumhlinzeki owaziwayo wamakhasino aselungile anamalayisense avela e-Malta nase-UK. Iphinde iphathe amakhasino athile, i-Swift iyisibonelo esihle. Amahhovisi ayo ase-Malta.
Ingabe i-Swift Casino Inezici Zokubhejela Ezemidlalo?
Cha, i-Swift Casino ayinayo i-sportsbook. Ungadlala imidlalo yasekhasino ye-inthanethi kuphela lapha.
Iphephe kangakanani i-Swift Casino?
I-Swift Casino inazo zonke izimpawu zekhasino ye-inthanethi ephephile:
Inelayisense ye-Malta Gaming Authority
Iphethwe ngumhlinzeki wesevisi yekhasino owaziwayo
Abadayisi abaphezulu abanjenge-Netent ne-Pragmatic Play bayatholakala
Iwebhusayithi isebenza ngeplatifomu ye-inthanethi ephephile ye-SkillOnNet
Ikhasino inikeza izindlela zokukhokha ku-inthanethi ezithembekile